Posted by Kaung Kin Ko at 10:27 AM
အကိုရေ…တိုက်ဆိုင်တယ်လို့ ပြောရမလားမသိ… ဒီစာလေးကို ဟိုတလောတုန်းလေးကပဲ ချင်းတွင်းမဂ္ဂဇင်းမှာလား၊ မိုးဂျာနယ်မှာလား မသိဘူး ဖတ်မိလိုက်သေးတယ်။ သူလဲ ဘာသာပြန်ထားတာပဲ။ ဖတ်ပြီးတော့လဲ ရင်ထဲမှာ မှတ်မှတ်ထင်ထင်ကို ဖြစ်သွားတာပဲ။ အခု အဲဒီစာလေးကို အကို့ဘလော့ဂ်မှာ ထပ်ဖတ်ရတယ်။ စာဖတ်သမားတွေက အကြိုက်ချင်း ခံစားချက်ချင်းတူတယ် ထင်တယ်နော်။
ရသမြောက်တယ်ဗျာ. တင်ပေးတာ ကျေးဇူး ကိုကောင်းကင်ကိုရေ. ဘယ်အရာမဆို စူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးမှ စကားတစ်ခွန်းကို ပြောထွက်သင့်ဖို့ သင်ခန်းစာရလိုက်တယ်.
အဲဒါလေး ဖတ်ဖူးတာ နည်းနည်းကြာပြီ.. ဘယ်မှာ ဖတ်တာလဲတော့ မေ့သွားပြီ.. ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာက မိဘတွေ မစူးစမ်းပဲ ပြောတာချည်းပဲ အပြစ် မဟုတ်ဘူး.. လျှာရှည်ပြီး အဖြစ်မှန်ကို ဖုန်းကွယ်တဲ့ သားရဲ့ အပြစ်လည်း အများကြီးပါတယ်.. ဟုတ်တယ်လေ သူစိမ်း ဒုက္ခိတနဲ့ ကိုယ့်ရင်သွေး ဒုက္ခိတ တူမှ မတူတာ.. ဖုန်းဆက်တဲ့ သား အမှန် မပြောတာကိုက ရှည်တာ
အကိုရေ ကျွန်တော်လဲ ဒီစာကို ဖတ်ဖူးတယ်ဗျ။ ထားပါတော့ ပြောချင်တာက အဲဒါမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်သာ မိဘနေရာမှာဆိုရင်လဲ ဒီလိုပဲ ပြောမိမှာပဲလေ။ တကယ်ဆို သူ မိဘကို မညာသင့်ဘူး။ အမှန်အတိုင်းပြောရင် မိဘတွေက လာတောင် ပြေးခေါ်ဦးမယ်။ တခြား ဒုက္ခိတ တယောက်ကို တင်ကျွေးဖို့ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ကလဲ ပိုလျှံဦးမှကိုး။ ပြီးတော့ စစ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ ကာလဆိုတော့ ဘယ်သူကမှ ဒုက္ခ ခံချင်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဘာလို့ သူ ညာပြောခဲ့တာလဲ။ မိဘက ကိုယ့်သားရင်းနဲ့ တခြားလူနဲ့တော့ ဘယ်တူပါ့မလဲဗျာ။ သူ့နေရာမှာ ကျွန်တော်ပဲ ထားပါတော့ အမှန်အတိုင်းပြောမယ်။ ညာတော့ မညာဘူး။ မိဘကို ဒုက္ခ မပေးချင်ရိုး မှန်ရင် တခြားသွားနေလိုက်မယ် သူငယ်ချင်းပါဆိုပြီးတော့ ညာပြောမိမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါက ကျွန်တော့် အမြင်ကို ပြောပြတာပါ။ အကို့ကို ကန့်လန့်တိုက်တာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ မညာဘူးဗျာ။ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေဖို့လဲ ဘယ်တော့မှ မစဉ်းစားဘူး။ အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာလေနော့။ ကြောက်စရာကြီး။
ပွင့်လင်းမှူတွေက တချို့နေရာတွေမှာ အသက်လောက်အရေးကြီးတယ်။
ဒုက္ခိတတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀ကို နားလည်စေဖို့ ဘာသာပြန်ပေးထားတာလေး ကောင်းလိုက်တာ။ လူတစ်ယောက်က အကောင်းပကတိအချိန်မှာသာ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာရင် ခိုင်မာမယ်။ ကိုယ့်မှာ ချို့ယွင်းချက်တစ်ခု ရှိလာတာနဲ့အမျှ အားငယ်စိတ်ဆိုတာ အလိုလို ၀င်လာတာပဲလေ။ ဒီလိုအားငယ်စိတ်ဝင်နေတဲ့လူတွေကို မိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေက တတ်နိုင်သမျှ အားပေးရမှာပါ။ နောက်ပီး မိဘဖြစ်လာမှတော့ ကိုယ်မွေးထားတဲ့ သားသမီးရဲ့အသံကြားတာနဲ့ သူဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာ မသိနိုင်ဘူးလား။ အားငယ်စိတ်ဝင်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အပြောအဆိုကအစ သိသာပါတယ်လေ။ နောက်တခုက ကိုယ့်သားသမီး မဟုတ်တာနဲ့ ပစ်စလတ်ခတ် လုပ်မယ်ဆိုတာတော့ မဟုတ်သေးဘူး ထင်ပါတယ်။ ဒုက္ခိတဖြစ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်နေရာမှာ ကိုယ့်ဆွေမျိုးသာဖြစ်ရင်..ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတော့ သေချာပေါက်တွေးသင့်တယ်ထင်တာပဲ။ လူလူချင်းကိုယ်ချင်းစာတရားပေါ့။ ကိုယ့်ထိမှ နာမယ်ဆိုရင်တော့ ဒါက ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့ စိတ်ထားမဖြစ်သေးပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူတစ်ယောက်မှာ ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ ကြင်နာသနားဖို့ကတော့ အလိုအပ်ဆုံးပဲ မဟုတ်လား။ သဲရေးတာလည်း အတော်ကို ရှည်သွားပီနော်။ ၀င်ပီးအကြံပေးတဲ့ သဘောပါ ဆရာရေ။ မှားသွားရင်လည်း ခွင့်လွှတ်နော်။